All Properties for Sale by Infinity Real Estate | iMyanmarHouse.com
ရောင်းရန် (Infinity Real Estate)
28ရပျကှကျ ပွညျထောငျစုလမျးမဒဲ့ဆငျး လုံးခငျြးအိမျ ရောငျးမညျ.
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8280195 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
41ရပျကှကျ လုံးခငျြးအိမျ ရောငျးမညျ.
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8280167 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ပွညျထောငျစုလမျးမဒဲ့ဆငျး လုံးခငျြးအိမျ ရောငျးမညျ.
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8274587 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
မိုးကောငျးလမျးမပျေါ တိုကျခနျး ရောငျးမညျ.
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8274564 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
28ရပျကှကျပငျလုံဆေးရုံအနီး ဆရာစံလမျးမကြောကပျ မွကှေကျ ရောငျးမညျ.
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8274563 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ရှဂေုံတိုငျလမျးမပျေါ Mini Condo ရောငျးမညျ.
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8259742 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ပါရမီလမျးမပျေါ MiniCondo ရောငျးမညျ.
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8259697 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8259654 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကနျလမျးအနီး ကမ်ဘာအေးလမျးမဂုတျခွံ လုံးခငျြးခွံ ရောငျးမညျ.
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8259251 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8259166 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်